शनिबार, २४ जेठ २०७७, २० : ००
राष्ट्रपतिलाई जिग्रीको पत्र
आइतबार, ०९ मङि्सर २०७५
सम्मानानीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यु,
म नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने एक नेपाली हुँ ।
आज १८ करोडको गाडी किन्ने विषयले हजुरको जताततै विरोध भैरहँदा मलाई हजुरको लागि एउटा पत्र लेख्न मन लाग्यो ।
जुन देशका नागरिकहरु औषधी उपचारको अभावमा मरिरहेका छन ,पोषणयुक्त खाना खान नपाएर हजारौ बालबालिका कुपोषणको शिकार भएका छन त्यो देशको राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले हजुरलाई कसरी १८ करोडको गाडी चढ्न मन लागेको होला ? सोध्न चाहन्छु ।
समृद्द देशका राष्ट्रप्रमुखहरु पैदल हिडेर कार्यालय गएको, साईकल चडेर हिडेको त हजुरले पनि समाचारमा त सुन्नु नै भएको होला ।
आज नेपालकी छोरी शृङ्खला खतिवडा विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको मन्चमा नेपालको शान बढाउदै छिन, विश्वमा नेपाल चिनाउदै छिन ।
बलात्कार पछी निर्मम हत्या गरिएकी स्व निर्मला पन्त का बुवा यो देशमा न्यायको भिख माग्दा माग्दै मानसिक सन्तुलन गुमाउन पुगेका छन ।
हजुर यि दुई छोरिहरुको विषयबारे पक्कै पनि जानकार नै हुनु हुन्छ होला ? हजुर त नेपालको राष्ट्रप्रमुख अनि सम्पुर्ण नेपाली नारिहरुको आमा समान हुनुहुन्छ । तपाईकी छोरी निर्मला पन्तको निर्मम हत्या गर्ने हत्यारा पक्रन र उसको परिवारलाई न्याय दिलाउन एउटी आमाको नाताले तपाईले पहलकदमी लिनु पर्ने हैन र ?
दिनदिनै तपाईका छोरीहरु बलात्कार भैरहदा कुन खुशीयालिमा १८ करोडको गाडी चढ्न मन लागिरा छ राष्ट्रपतिज्यु ?
तपाईकी छोरी शृङ्खला खतिवडालाई विश्व सुन्दरिको ताज पहिराउन विश्वभरिका नेपालीहरु लागिरहदा तपाईको चै के गरिरहनु भएको छ राष्ट्रपतिज्यु ?
त्यसैले अहिले १८ करोडको गाडी चढ्नुको साटो स्व. निर्मला पन्तको परिवारलाई न्याय दिलाउन र विश्वसुन्दरिमा शृङ्खला खतिवडालाई जिताउन तपाई लाग्नु भयो भने सबैभन्दा ठुलो जित तपाईको हुनेछ राष्ट्रपतिज्यु ।
बरु त्यो १८ करोडले स्व. निर्मला पन्त र शृङ्खला खतिवडाको नाममा ९,९ वटा विधालय बनाईदिनु भयो भने पढ्न नपाएका तपाईका धेरै छोराछोरिले पढ्न पाउँछन ।
त्यो खुशी तपाईले अरबौं रुपैयाँमा पनि किन्न सक्नुहुन्न राष्ट्रपतिज्यु । महान त त्यो हुन्छ जो आफ्नो लागि हैन अरुको लागि बाँच्छ । तपाई संग पनि यो अवसर छ खेर नफाल्नु होला ।
(उही नेपाल र नेपाली लाई माया गर्ने तपाईको छोरो कुमार कट्टेल ।
आफ्ना मनका कुरा, खोल्नुहोस् पुरा । तपाईको जीवन भोगाई र अनुभव अमूल्य छ । त्यो कसैका लागि सिकाई र प्रेरणाको प्रतिविम्ब बन्न सक्छ । आफ्नो मनका कुरा लेखेर वा बोलेर हाम्रो Facebook र mail.mankakura@gmail.com मा पठाउनु होला । साथै YouTube र Twitter मा जोडीएर हाम्रो परिवार पनि अवश्य बन्नुहोला ।
बटुक र चुकौनी, क्या मिठो हो, कागुनोको खिर । तरुवा, रिकीकुर, चाम्रे र याङ्बेन फाक्सा उस्तै मिठो छन् यी सबै...
नेपाली काँग्रेस सिन्धुलीले क्षेत्रिय समिति सभापति र प्रदेश समिति सभापतिहरुको टुंगो लगाएको छ । ...
पाल्पाका कृष्ण खड्का मिठो गीत गाउँछन् । पहिले त नाच्थे पनि । तर अहिले उनी मुन्टो भन्दा मुनिको भाग चलाउन...
तनहुँका सुमन वाग्ले भित्तेकलामा पोख्त छन् । सानैदेखि चित्रकलामा रुची भएपनि उनले विगत ५ वर्षदेखि भित्तेकलाको काम सुरु गरेका हुन्...
Manka Kura - Reflection of Inspiration
सधंर्ष र सफलता
पुरा हुन् या अधुरा ? हरेक मानिससँग सपना छ । गल्ती कमजोरी होस् कि जीवन धान्न दुखसँग गरेको पौंठेजोरी ? हरेक मानिससँग अनुभवको महासागर छ । सफल होस् वा असफल ? हरेक मानिससँग प्रेरणादायक कथा छ । जसलाई मनन गरेर अघि बढे हरेक मानिस सकारात्मक सोचको धनी हुनेछ । आमुल परिर्वतनको बाटोतर्फ जीवनलाई मोडेर अग्रगामी छलाङ मार्नेछ । त्यसैले हरेक जनको मनमा गुम्सिएका प्रेरणादायी कथा पोख्ने साझा थलो हो, मनका कुरा डटकम ।
सूचना विभाग दर्ता नं. ........
Address पुरानो बानेश्वर